के बाइबल विज्ञानसित मेल खान्छ? | बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरू
लेखको भाषा Hindi (Roman) Punjabi (Roman) अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अबुआ अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्टाइ अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आइरिस साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इजरायली साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उइघुर (अरबी) उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उरूग्वेयन साङ्केतिक भाषा उर्दू उर्होबो एङ्गोलन साङ्केतिक भाषा एफिक एम्बेरा (उत्तरी) एम्बेरा (चामि) एम्बेरा (साटिओ) एस्टोनियन ओक्पे ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कम्बोडियन काचिन काजाक काबार्डिन-सर्केस काबुभरदियानु काम्बा कालांगा (बोत्स्वाना) किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (टिना) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्रोएसियन साङ्केतिक भाषा क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (हुआल्लागा हुआनुको) क्षोसा खाकस गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक ग्वाटेमाला साङ्केतिक भाषा ग्वाडेलोपिएन क्रिओल चाङगाना (मोजाम्बिक) चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (युनानिज) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुभास चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोल जमैकन क्रिओल जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टर्किश साङ्केतिक भाषा टाटार टान्ड्रयो टालियन टिकुना टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टुभिनियन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ताइवानी साङ्केतिक भाषा ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्वी त्सोंगा थाई थाई साङ्केतिक भाषा दक्षिण अफ्रिकी साङ्केतिक भाषा दारी नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (भेराक्रुज) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेपाली नोंगा न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पानामानियन साङ्केतिक भाषा पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (पश्चिम अफिका) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोकोम्ची पोमेरानियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फान्टे फिजियन फिनिश फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फुटुना (पुर्वीय) फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा फ्राफ्रा बंगाली बम्बारा बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिकोल बियाक बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बेलोरूसी बेल्जियन फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बोलिभियन साङ्केतिक भाषा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मराठी मरुसियन क्रिओल मलावी साङ्केतिक भाषा मले मलेसियन साङ्केतिक भाषा मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मारी मार्तिनिकन क्रिओल मार्शलिज मालागासी माल्टिज माशी मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिङ्रेलियन मिजो मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेडुम्बा मोजाम्बिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यानमार साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रियुनियन क्रिओल रुटोरो रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोङ्गा रोमानियन रोमानियन साङ्केतिक भाषा रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (भ्लाक्स, रुस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक रोमानी (सर्बिया) लक्जमबर्गियन लाओशियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लिथुआनियन साङ्केतिक भाषा लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लेगा लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वास्टेक (सान लुइस पोटोसी) विची वेल्श वोलफ वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सातेरे-मावे सामोअन साल्भाडोरन साङ्केतिक भाषा सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेङ्गा (जाम्बिया) सेत्स्वाना सेपुलाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस स्विडिस साङ्केतिक भाषा हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हन्स्‌रिक हवाइ पिजिन हाइटियन क्रिओल हामशेन (आर्मेनियन) हामशेन (सिरिलिक) हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन होण्डुरस साङ्केतिक भाषा हौसा
मेल खान्छ। बाइबल विज्ञानको किताब नभए पनि यसमा विज्ञानसम्बन्धी बताइएका कुराहरू सही छन्‌। बाइबलमा विज्ञानसम्बन्धी भएका तथ्यहरू बाइबल लेखिएको समयका थुप्रै मानिसले विश्‍वास गर्ने कुराभन्दा बिलकुलै फरक थियो। बाइबल विज्ञानसित मेल खान्छ भनेर प्रस्ट पार्ने केही उदाहरण विचार गरौँ।
ब्रह्‍माण्ड सृष्टि गरिएको थियो। (उत्पत्ति १:१) तर थुप्रै पुराना दन्त्यकथाअनुसार ब्रह्‍माण्ड सृष्टि गरिएको थिएन बरु यो ठूलो धमाका भएर आफसेआफ उत्पत्ति भएको थियो। बेबिलोनीहरूले दुइटा महासागरबाट देवताहरू आएर ब्रह्‍माण्डलाई जन्म दिएका थिए भनेर विश्‍वास गर्थे। अरू दन्त्यकथाहरूअनुसार ब्रह्‍माण्ड एउटा बडेमाको अण्डाबाट निस्केको थियो।
ब्रह्‍माण्ड प्राकृतिक नियमहरूअनुसार चल्छ, देवताहरूको इच्छाअनुसार होइन। (अय्युब ३८:३३; यर्मिया ३३:२५) संसारभरि फैलिएका विभिन्‍न दन्त्यकथाअनुसार देवताहरूले के गर्नेछन्‌ भनेर मानिसहरूलाई थाह हुँदैन अनि तिनीहरूको निर्दयी कामले गर्दा मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌।
पृथ्वी कुनै आडविना झुन्डिरहेको छ। (अय्युब २६:७) प्राचीनकालका मानिसहरू पृथ्वी चेप्टो छ अनि यसलाई कुनै राक्षस वा जनावरले थामेको छ, जस्तै: भैँसी वा कछुवाले भनेर विश्‍वास गर्थे।
महासागर र अन्य स्रोतबाट पानी वाफ भएर बादल बन्छ अनि पछि बादल पानी, हिउँ वा असिनाको रूपमा बर्सिन्छ। यसरी बर्सिएको पानी खोलानालामा बग्छ। (अय्युब ३६:२७, २८; उपदेशक १:७; यसैया ५५:१०; आमोस ९:६) प्राचीन ग्रीकहरू महासागरको पानी जमिनमुनिबाट गएर खोलानालामा बग्छ भनेर विश्‍वास गर्थे अनि यस्तो सोचाइ १८ औँ शताब्दीसम्म व्याप्त थियो।
अहिलेका पहाडहरू कुनै समय समुद्रमुनि थिए। (भजन १०४:६, ८) तर विभिन्‍न दन्त्यकथाअनुसार देवताहरूले पहाडहरू अहिले जस्ता छन्‌, त्यस्तै बनाएका थिए।
सरसफाइमा ध्यान दिँदा मानिस स्वस्थ हुन्छ। प्राचीन समयका इस्राएलीहरूलाई सरसफाइसम्बन्धी विभिन्‍न नियम दिइएको थियो। जस्तै: सिनु छोएपछि नुवाइधुवाइ गर्नुपर्ने, सरुवा रोग लागेको व्यक्‍तिलाई अलग्गै राख्नुपर्ने अनि मलमूत्रको उचित तरिकामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। (लेवी ११:२८; १३:१-५; व्यवस्था २३:१३) तर त्यतिबेलाका मिश्रीहरूको एउटा उपचारविधिमा भने घाउमा मानिसको मलमूत्र मिसाएर बनाइएको औषधी प्रयोग गरिन्थ्यो।
निष्पक्ष भई जाँच्ने हो भने बाइबलमा त्यस्ता गलत जानकारीहरू छैनन्‌। मानिसहरू बाइबलमा विज्ञानसित मेल नखाने गलत जानकारीहरू छन्‌ भन्‍ने गर्छन्‌। जस्तै:
मिथ्या: बाइबलले ब्रह्‍माण्ड २४ घण्टे ६ दिनमा सृष्टि गरिएको हो भन्छ।
तथ्य: बाइबलमा बताइएअनुसार परमेश्‍वरले ब्रह्‍माण्ड युगौँयुगअघि सृष्टि गर्नुभएको हो। (उत्पत्ति १:१) उत्पत्ति अध्याय १ मा सृष्टिको प्रत्येक दिनलाई एउटा समयावधिको रूपमा वर्णन गरिएको छ र त्यो एक दिन कति लामो थियो भनेर तोकेरै बताइएको छैन। वास्तवमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गरिएको समयावधिलाई पनि “दिन” भनिएको छ।—उत्पत्ति २:४.
मिथ्या: बाइबलले प्रकाश संश्‍लेषण (फोटोसिन्थेसिस) गर्न नभई नहुने सूर्य सृष्टि गरिनुअघि नै बोटबिरुवा सृष्टि भइसकेको थियो भन्छ।—उत्पत्ति १:११, १६.
तथ्य: बाइबलमा आकाशका ताराहरूमध्ये एक, सूर्य बोटबिरुवाभन्दा अगाडि नै सृष्टि भइसकेको थियो भनेर बताइएको छ। (उत्पत्ति १:१) सृष्टिको पहिलो ‘दिनमै’ सूर्यको मधुरो किरण पृथ्वीमा आयो। सृष्टिको तेस्रो ‘दिनमा’ वायुमण्डल खुलेपछि प्रकाश संश्‍लेषण गर्न चाहिने पर्याप्त किरण पृथ्वीमा आयो। (उत्पत्ति १:३-५, १२, १३) पछि मात्र पृथ्वीबाट सूर्य प्रस्ट देखिन थाल्यो।—उत्पत्ति १:१६.
मिथ्या: बाइबलले सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ भन्छ।
तथ्य: उपदेशक १:५ भन्छ: “सूर्य उदाउँछ, सूर्य अस्ताउँछ अनि फेरि उदाउनलाई त्यो हतारिँदै पहिलेकै ठाउँतिर जान्छ।” तर यसले पृथ्वीबाट हेर्दा सूर्यको चाललाई चित्रण गरेको जस्तो देखिन्छ। मानिसहरूलाई पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ भनेर थाह भए तापनि तिनीहरू अहिले पनि “सूर्योदय” र “सूर्यास्त”-जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन्‌।
मिथ्या: बाइबलले पृथ्वी चेप्टो छ भन्छ।
तथ्य: बाइबलमा “पृथ्वीको सबैभन्दा टाढा पर्ने इलाका” भन्‍ने अर्थ दिन “पृथ्वीको कुनाकुना” भन्‍ने अभिव्यक्‍ति प्रयोग गरिएको छ। (प्रेषित १:८; फुटनोट) तर यसले पृथ्वी चेप्टो छ अथवा यसको किनारा छ भनेर जनाउँदैन। त्यसैगरि “पृथ्वीको चारै कुना” भन्‍ने अभिव्यक्‍तिले पूरै पृथ्वीलाई जनाउँछ। पूरै पृथ्वीलाई जनाउन अहिले पनि मानिसहरू चारै दिशा भन्‍नेजस्ता अभिव्यक्‍ति चलाउँछन्‌।—यसैया ११:१२; लुका १३:२९.
मिथ्या: बाइबलले गोलाकारको परिधि त्यसको व्यासको तीन गुणा बढी हुन्छ भन्छ, जबकि पाइको (π) मान लगभग ३.१४१६ हो।
तथ्य: पहिलो राजा ७:२३ र २ इतिहास ४:२ मा बताइएको ‘धातु ढालेर बनाइएको विशाल खड्‌कुँलोको’ व्यास १० हात र त्यसको “गोलाइ ३० हात” थियो। त्यो ठ्याक्कै नाप नभई नजिकको नाप हुन सक्छ। यो खड्‌कुँलोको भित्र र बाहिरको गोलाइ र व्यासको नाप पनि हुन सक्छ।
बाइबल बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ बाइबल वैज्ञानिक तवरमा सही विज्ञान र बाइबल
बाइबलबाट सृष्टिकर्ताबारे हामी के थाह पाउन सक्छौँ?
के यसको कुरा वैज्ञानिक तथ्यहरूसित मेल खान्छ?
परमेश्‍वरले कहिले ब्रह्‍माण्ड सृष्टि गर्न सुरु गर्नुभयो?
जवाफ उत्पत्तिको किताबमा चलाइएको “सुरुमा” र “दिन” भन्‍ने शब्दमा लुकेको छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने के बाइबल विज्ञानसित मेल खान्छ?
ijwbq लेख ८२